प्रधानमन्त्री देउवालाई आपुर्ति सचिव प्रेम राईले टेरेनन, प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेरी लेख्यो पत्र – YesKathmandu.com
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले जग्गा खरिद प्रकरणमा अनिमितता गरेको सार्वजनिक टिप्पनी भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आपुर्तिमन्त्रालयका सचिव प्रेम राईलाई सत्य तथ्य छानविन गर्न निर्देशन दिए । लिखित निर्देशन दिएको लामो समय वितिसक्दा पनि सचिव राईले कुनै वास्ता गरेनन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले जग्गा खरिद प्रकरणको यथार्थ जानकारी गराउन सचिव राईलाई लिखितरुपमै पत्राचार गरेको थियो । सरोकारवाला मन्त्रालय नै मौन बसेको देखेर प्रधानमन्त्री कार्यालय चकित परेको छ । जग्गा खरिद प्रकरण बारे यथार्थ जानकारी माग्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुनः सोमवार मन्त्रालयलाई लिखित आग्रह गरेको स्रोतले बताएको छ ।
विगत १८ बर्षदेखि सरकारले इन्धन संचितिकरणको कुनै उपाय अबलम्बन गरेको छैन । इन्धन संचितिकरण नभएका कारण आपुर्ति बन्द भए एकसातामा हाहाकार मच्चिने सम्भावना छ । इन्धनको क्षमता बढाउन भन्दै आयल निगमले जग्गा खरिद गरेको थियो ।
निगमले जग्गा खरिदमा ठुलो आर्थिक अवचलन गरेको भन्दै ब्यवस्थापिका संसदको लेखा र अर्थसमितिमा कुरा उठेको छ । लेखा र अर्थसमितिले छानविन समिति नै बनाई सकेका छन् । तरपनि सरोकारवाला आपुर्ति मन्त्रालय भने मौन बसेको छ । मन्त्रालयले हालसम्म कुनै छानिव समिति समेत बनाउन सकेको छैन ।
One thought on “प्रधानमन्त्री देउवालाई आपुर्ति सचिव प्रेम राईले टेरेनन, प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेरी लेख्यो पत्र”
एमालेले किन नि टेर्ने कॉंग्रेसले भनेको?
देशभर बर्षा र हिमपात, आन्तरिक उडान अवरुद्ध
गगन पत्नीले लेखिन : मलाई चुनावको परिणाम थाहा छैन तर बुवा र पतिका लागि प्रार्थना गरिरहेकी छु
कहाँ छन यी दुर्लभ मुर्तिहरु ? जसको सम्झना मात्र बाँकी छ
५ प्रदेश सभा बैठकको तयारी पुरा , कांग्रेस र माओवादीको बीचमा एमाले
भक्तपुरमा बम विस्फोट, बिस्फोट गराउने व्यक्ती फरार